Wareega 1-aad Doorashada Guddoomiye Kuxigeenada oo lasoo gabagabeeyay
4:09 am - Sunday September 24, 2017
Home » Wararka » Wareega 1-aad Doorashada Guddoomiye Kuxigeenada oo lasoo gabagabeeyay
Waxaa la soo gabagabeeyay wareegii koowaad ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ay ku tartamayaan illaa iyo 16 musharax.
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku tartamaya 6 Musharax oo hada sida ay muuqato wareega 1-aad kasoo gudbeen 3 musharax.
Codbixintii dhacday ee dhinaca Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa musharaxiinta waxa ay codadka u kala heleen sida tan;
1- Xildhibaan C/wali Sheekh Ibraahim Muudeey 111-cod.
2- Faarax Sheekh Cabdiqaadirna wuxuu helay 94-cod.
3- Khadiijo ayaa soo saddaxaysa oo heshay 27 cod.
4- Siciid Ciid oo helay 17-cod.
5- Jaylaani Iikar wuxuu helay 4 cod.
6- Khaalid Macoow waxa uu helay 7 cod.
Ma jirto cid buuxisay shuruudaha guusha, waxa ayna taasi keeneysaa in loo gudbo wareeg 2-aad oo ay ku tartami doonaan 3 mudane ee ugu codadka badan, waxaana wareega labaad ku tartami doonna musharixiinta kala ah, C/wali Sheekh Muudeey, Faarax Sheekh C/qaadir iyo Khadiijo Max’ed Diiriye.
Dhinaca kale Musharaxiinta ku tartamaya xilka Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu gaaraya 10 mudane ayaa lasoo gaba-gabeeyay tirinta cododkooda, waxa ayna codadka u kala heleen sida tan;
Mahad Cabdalla Cawad: 70 cod
Cabdulqaadir Sheekh Cali “Bagdaadi” : 53 cod
Burhaan Aadan Cumar : 26 cod
Cabdullaahi Goodax Barre : 18 cod
Dr. Cilmi Maxamuud Nuur : 15 cod
Xuseen Cabdi Cilmi : 12 cod
Cabdiweli Maxamed Qanyare: 12 cod
Maryan Axmed Haaruun : 10 cod
Xuseen Cabdalla : 8 cod
Waxaa guud ahaan codeysay (235) Xildhibaan, waxaa xumaaday hal cod, waxaana la filayaa in wareega labaad la isla gudbo.
Filed in Wararka
Doorashada Kuxigeenka 1aad iyo 2aad ee Baarlamaanka oo bilaabmatay
Muudey oo ku guuleystay Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka